Ubuchwephesha boLwandle boMbane obuSusa uLwandle kuMvelisi kunye noMvelisi ngokuthe ngqo | Uthandile
Isixhobo sisebenzisa iyunithi yokubuyisela ekhethekileyo ukufunxa ubushushu kumanzi apholisayo enjini ukuya kumbhobho wokukhupha, emva koko uye kwisilencer, kwaye ekugqibeleni kwinto enye epholileyo yamanzi. Sebenzisa ubushushu obuqokelelweyo ukukhupha amanzi olwandle kunye nokujiya emanzini amatsha ngesiteyisi esinamaqela amaninzi. Amanzi afunyiweyo acociweyo akumgangatho ophezulu awadingi zonke iintlobo zokubuyela umva osmosis inwebu kunye namandla ombane.
UkuTyiwa kwaManzi kuLwandle okuThuleyo okungathethekiyo iGenset
Amafutha asebenzayo: Irhasi yendalo, irhasi yeCoalmine, umoya wetyuwa.
Ngaba iNkqubo inokuqinisekisa ukuqiniswa kwenkqubo yokubonelela ngokudibeneyo.
Ukusetyenziswa ngokubanzi kwenkqubo yokubuyisela ukushisa kufikelela kuma-90%.
Ikhabhathi yolawulo oluzenzekelayo (ungqamaniso, ukuhanjiswa komthwalo)
Iijenreyitha zisebenza ngokuzenzekelayo.
Ukhuseleko, uyilo olukhulu kakhulu.
Cwaka Super CCit Generator
Qaphela: Inkqubo yokubonelela ngokudibeneyo inokukhetha kwizinto ezilandelayo.
Intshayelelo-iseti yomenzi wenkunkuma yangaphakathi enokuhambisa isanti emanzini olwandle.
Umgaqo: isixhobo sisebenzisa iyunithi yokubuyisela ekhethekileyo ukufunxa ubushushu kumanzi apholisayo enjini ukuya kumbhobho wokukhupha, emva koko uye kwisilencer, kwaye ekugqibeleni kwindawo yokupholisa amanzi. Sebenzisa ubushushu obuqokelelweyo ukukhupha amanzi olwandle kunye nokujiya emanzini amatsha ngesiteyisi esinamaqela amaninzi. Amanzi afunyiweyo acociweyo akumgangatho ophezulu awadingi zonke iintlobo zokubuyela umva osmosis inwebu kunye namandla ombane.
Iprojekthi yethu: Ukuveliswa kwamanzi kunye nombane
Ukuveliswa kombane kwamandla ombane ikakhulu kubhekisa kwimveliso kunye nasekuboneleleni ngamanzi olwandle kunye nombane.
Kuba iindleko zamanzi olwandle zetyuwa zixhomekeke kwindleko zombane kunye nokusetyenziswa komphunga ubukhulu becala, amandla ombane asebenzisana nombane angasebenzisa umphunga nombane wesixhobo samandla ukubonelela ngombane kumatshini wokuhambisa ityiwa elwandle, ukuze kuqinisekiswe ukusetyenziswa kwamandla ngokufanelekileyo ukunciphisa iindleko zamanzi olwandle zetyuwa. Uninzi lwezityalo zetyuwa zakhiwe ecaleni kwezityalo zamandla, eyona modeli iphambili yokwakha yeeprojekthi ezinkulu zetyuwa.
Kwinkqubo yokuvelisa umbane, iiseti zejenereyitha yokutsha zangaphakathi ziya kuvelisa ubushushu obuninzi ngenxa yokukhutshwa kwegesi ephuma kumlilo kunye nokukhuhlana okubangelwe yintshukumo. Ayisetyenziselwa nje kuphela obu bushushu, kodwa ikwafuna ilahleko yamandla aluncedo kwiinjini yomlilo yangaphakathi yokupholisa (njengabalandeli bamandla kunye neefeni zokupholisa iijenereyitha). Inkqubo yokupholisa yeinjini zomlilo zangaphakathi zihlala zisebenzisa iindlela ezimbini, enye kukupholisa umoya kwaye enye kukupholisa amanzi. Ngokubanzi, kwisiphumo sokupholisa esingcono kunye nexesha elide lokusebenza, uninzi lwejenreyitha zisebenzisa indlela yokupholisa amanzi.
Ukuyilwa kwethu kujolise ekuswelekeni kweseti yomvelisi wokutsha yangaphakathi, kwaye ibonelele ngeseti yomatshini wangaphakathi wokutsha onokusebenzisa amanzi olwandle ukupholisa iseti yomvelisi womlilo wangaphakathi kunye nokwenza amanzi amatsha ngomphunga, ukuze kufezekiswe injongo yolondolozo lwamandla kunye nokusingqongileyo ukhuseleko.
Uyilo aludingi fan fan yamandla kuphela, ifeni yeradiyetha kunye nejeneretha, ukunciphisa amandla omlilo angaphakathi aseta amandla okusetyenziswa kwamandla, ukuphucula amandla okusebenza kweeseti ezivelisa idizili, kunye nobushushu kwirhasi evelisa inkunkuma evelisa umbane, kunye nokuvelisa Seta ngokwaso ukwenza inkqubo yomsebenzi izama ukusebenzisa ubushushu obuveliswe kukukhuhlana, ukusetyenziswa kwedizili evelisa iiseti zobushushu benkunkuma ukufudumeza amanzi, kwelinye icala umatshini ukusasaza ubushushu, kwelinye icala ukufumana amanzi afihliweyo kunye netyuwa yokufudumeza amanzi. , isebenza, Ifanelekile ngakumbi kwiziqithi, iinqanawa zolwandle kunye nezinye iindawo apho kunamanzi amatsha anqabileyo.
Egqithileyo I-15kva-500kva evulekileyo / ethe cwaka kwiNdalo yeeJenereyitha zeGesi
Okulandelayo: Hlanganisa ukupholisa, ukufudumeza kunye noMvelisi weNkqubo yaMandla
UMZEKELO AMANDLA I-VOLTAGE UBUDLELWANE ISIGABA UKUDALA KWEZAKHONO UKUCHAZWA KWENKONZO YAMANZI
I-KW / KVA V HZ KW / H. L / NGEYURE
I-SWD-30S3 30/37 220/380 50/60 3 24 100
I-SWD-50S3 50/62 220/380 50/60 3 40 160
I-SWD-100S3 100/125 220/380 50/60 3 80 320
I-SWD-200S3 Ngama-200/250 220/380 50/60 3 160 640
I-SWD-400S3 400/500 220/380 50/60 3 320 1280
10-1000kva Vula uhlobo lwesakhelo sedizili kuMbane oDala ...
Hlanganisa ukupholisa, ukufudumeza kunye noMvelisi weNkqubo yaMandla